Zambia: Rahonan’ny zanakalahin’ny filoha ny mpanao gazety, “Matinay ialahy” · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 15 Janoary 2019 6:43 GMT
Vakio amin'ny teny Español, čeština , Français, English
Ny fampakarambadin'i Sata Kazim, zanakalahin'ny filoha zimbaboeiàna, Michael Sata. Sary tao amin'ny pejy Facebook “Zambia Watchdog”
(Fanamarihana; lahatsoratra teny anglisy nivoaka tamin'ny Martsa 2014)
Tsy ela akory izay, voadaroka sy norahonana ho faty ny mpanao gazety iray tokony hiatrika fitsaràna noho ny raharaha iray misy ifandraisany amin'ilay tranonkalam-baovao Zambia Watchdog, media elektrônika mpanao fanadihadiana sy mpilaza vaovao izay voasakana ao Zambia amin'izao fotoana izao. Ny voalaza fa nanao herisetra taminy ve ? Ny zanakalahin'ny filoha zambiàna, Michael Sata.
Nifantoka tany amin'i Kazim Sata ny fijerin'ny rehetra taorian'ny fampakarambadiny izay tsy natrehan'ny rainy noho izy nandeha tany ivelan'ny firenena. Lasa any aminà fitodiana tsy fantatra ny filoha raha ny tatitr'ireo media sasany, raha ny hafa indray milaza fa nankany New Delhi izy noho ny antony ara-pahasalamàna. Herinandro vitsy taty aoriana, niseho tao Zimbaboe, firenena mifanolo-bodirindrina aminy, ny filoha Sata, nanatrika ny fampakarambadin'i Bona, zanakavavin'ny filoha Robert Mugabe.
Araka ny lazain'ny “Zambian Watchdog”, izay nampahafantatra ilay raharaha, natonin'i Kazim i Thomas Zgambo, mpanao gazety iray ao amin'ny distrikan'i Kabwata, telo kilaometatra teo ho eo niala ny lapan'ny filoha, ary nopetahany totohondry sy nompainy. Notaterin'ilay tranonkala fa:
izao (Alarobia) marina izao, tsy hay izay antony fa dia nodarohan'ny zanakalahin'ny filoha, Michael Sata Kazimu, i Thomas Zgambo, mpanao gazety.
Tao anatin'ny fiarany Mitsubishi Pajero, mitondra ny laharana ALB 9252 i Karim, olona hafa no teo amin'ny familiana, ary nahatsikaritra an'i Zgambo tao anaty klioba sôsialy iray tao Kabwata. Nidina ny fiarany izy.
Tonga dia nanitsy teny amin'i Zgambo ary nidaroka nanisy totohondry azy teny amin'ny tratra no sady nihiakiaka ny hoe “iwe [ialahy ry ] … [nofafàna ny ompa].
Nanafintohina ny olona nanatrika tao amin'ilay klioba tao Kabwata ilay tranga, izay niatoan'i Zgambo mba hihaonany amin'ny nàmany.
Zgambo toa niteny hoe :
Hanoratra ho an'ny rainy aho. Tena tsy ampy saina ilay Kazim. Ahoana no ahafahany manao toetra toy izany aman'olona ? Na ho inona na ho inona, tsy hisy afa-tsy 10 taona raha be indrindra ny rainy no ho mpitondra, avy eo hiova izany.
Katuba old boys (Katuba razokinibe), dia mpamaky iray naneho hevitra momba ilay zavaniseho, ary nampahatsiahy ny fahazaran'ny iray tamin'ireo zanak'i Frederick Chiluba, filoha fahiny, nisotasota olona tsotra. Nanoratra izy (tsy nisy rohy ity fanehoankevitra ity):
Tsy hanao afa-tsy ny hampiasa loha ny rainy iIlay lazaina ho zanaky ny filoha, ary tokony ho tsaroany ny fomba nitondràn'ny olona an'i Castro taorian'ny nialàn'ny rainy teo amin'ny fitondràna. Nohazaina sy nodarohana isaky ny manandrana hivoaka mba hivezivezy lery. Ary tokony ho tsaroany fa ho avy ny fotoana izay tsy hananany mpiambina manokana intsony; na Pajero ho avilivily. Mampalahelo ny Afrikàna.
Anisan'ireo mpanao gazety marobe nosamborina tato anatin'ny volana vitsivitsy i Zgambo noho ny filazana azy ho manana fifandraisana amin'ny tranonkala Zambia Watchdog. Efa votsotra aloha hatreto i Wilson Pondamali, mpanao gazety miasa tena, niaraka voasambotra tamin'i Zgambo sy ilay mpampianatra fahiny momba ny asa fanaovana gazety, Clayson Hamasaka.